Man City oo isku diyaarineysa inay dalab ka gudbiso Lionel Messi – Gool FM
Man City oo isku diyaarineysa inay dalab ka gudbiso Lionel Messi
(Manchester) 25 Agoosto 2020. Kooxda reer England ee Manchester City ayaa raadineysa inay ka faa’iideysato xaalada uu haatan ku sugan yahay kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, iyo suurtogalnimada uu kaga dhaqaaqi karo garoonka Camp Nou xagaagan, kaddib guuldaradii (8-2) aheyd ee ka soo gaartay kooxda Bayern Munich kulankii wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League.
Ilo wareedyo ayaa u sheegay shabakada caalamiga ah ee “ESPN” in Manchester City ay ka shaqeyneyso inay bangiga u jabiso, si ay ula soo wareegto kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, iyadoo aan ku xadbin sharciyada dhaqaalo wanaaga.
Warka ayaa waxaa intaas lagu daray, in Man City way ogtahay in heshiiska Messi uu adkaan doono, laakiin waxay dooneysaa inay diyaar u sii noqoto haddii ay dhacdo inay soo baxdo xulashooyin ay ku heli karto.
Sidaas darteed saraakiisha kooxda reer England ee Manchester City ayaa waxay ka wada hadleen qiimaha, haddii ay dhacdo in Barcelona ay ogolaato inay ku iibiso qiimo macquul ah.
Go’aanka rasmiga ah ee haatan kooxda Barcelona ayaa ah, in Lionel Messi uusan beec aheyn, koox kasta ee rajeeneysa inay iibsatana ay tahay inay bixiso qiimo dhan 700 million euros, kaasoo ah qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa Blaugrana.
Luis Suarez oo diiday inuu si dagenaan ah kaga tago kooxda Barcelona